Ny sehatry ny fizahan-tany ao Jamaika dia mitondra fanarenana ara-toekarena matanjaka
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Ny sehatry ny fizahan-tany ao Jamaika dia mitondra fanarenana ara-toekarena matanjaka
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Herinandro fanamarihana ny fizahan-tany ao Jamaika
Tao anatin'ny fanamarihana natao tao anatin'ny Herinandron'ny fanentanana momba ny fizahan-tany ao Jamaika, ny 26 septambra hatramin'ny 2 oktobra, ny minisitry ny fizahan-tany, Hon. Edmund Bartlett, dia mandrisika ny olom-pirenena rehetra hanao vaksiny fanoherana ny COVID-19 mba hamonjy ain'olona sy hanohizana hitarika ny fanarenana ara-toekarena ny nosy.
Ny minisitry ny fizahan-tany dia manentana ny olom-pirenena hatao vaksiny rehefa mankalaza ny herinandro fahatsiarovan'ny fizahantany ny nosy.
Raha jerena ny fanarenana amin'ny ankapobeny, ny fisian'ny fizahan-tany ho mpamily io fanarenana io dia hita miharihary eto amin'ny firenena.
Ny fahasalamana sy ny fiarovana ny mpitsidika rehetra ary ny mponina dia manohy ny laharam-pahamehan'ny Jamaika.
“Mandritra ny fankalazantsika ny Herinandron'ny fahatsiarovan-tena momba ny fizahan-tany amin'ny lohahevitra 'Fizahan-tany ho an'ny fampidirana fitomboana, 'andao ampidirina ao anaty fifangaroana ny vaksiny, satria izany no hahatonga ny fanarenana antsika ho feno kokoa, fa ny tena zava-dehibe dia ny famonjena ain'olona, ​​"hoy ny minisitra Bartlett. “Rehefa jerentsika ny fomba nahasitranantsika tamin'ny ankapobeny, ny fisian'ny fizahan-tany amin'ny maha mpamily an'io fanarenana io dia hita miharihary. Nahazo vola ho an'ny taona 1.2 lavitrisa dolara amerikana ho an'ny toekarena isika ary mpitsidika an-tapitrisany mahery no nentinay teto amin'ny firenena. ”
Notohizan'ny minisitra Bartlett fa: "Nodinihintsika tamin'ny fomba fakan-tahaka ny famaritana ny areti-mandringana ary nanamarika izao tontolo izao ny fomba nitondran'ny mpilalao ao amin'ny indostria sy ny firenena iray manontolo ny fomba fanaovan-tsonia ao Jamaika. Tokony hitantana ny fitantanan-draharaha isika mba tsy hamelantsika olona any aoriana. ”
Ny fahasalamana sy ny fiarovana ny mpitsidika rehetra ary ny mponina dia manohy ny laharam-pahamehan'ny Jamaika. Tany am-piandohan'ity volana ity dia namoaka hetsika fanaovana vaksiny ity nosy ity mba hanamorana ny fitantanana ireo vaksininy manerana ny nosy miaraka amina andian-dahatsoratra fanaovana vaksiny an-tsitrapo an-tsitrapo amin'ireo toerana stratejika manerana ny firenena. Ity kapila ity dia fanitarana ny programa JAMAICA CARES mamaky tany, valinteny iray manerantany momba ny COVID-19 izay ahitana ny Resilient Corridors ao amin'ny nosy ary ireo mari-pahaizana momba ny fahasalamana sy fiarovana feno.
Ny Resilient Corridors ao Jamaika, izay mandrakotra maherin'ny 85 isan-jaton'ny vokatra fizahan-tany amin'ny nosy ary tsy latsaky ny iray isan-jaton'ny mponina, no nanoratra taham-pitsaboana latsaky ny iray isan-jato tamin'ny taona lasa. Mampiharihary mazava ny fahombiazan'ny programa, izay tokana amin'ny karazany ao Karaiba. Izy io dia manome tontolo azo antoka ho an'ny mpitsidika mankafy ny vokatra fizahan-tany ary manala ny fifandraisana mivantana amin'ny ankamaroan'ny mponina ao an-toerana.
Misokatra ho an'ny dia ihany i Jamaika ary manohy mandray tsara ireo mpitsidika. Ireo kaonty momba ny fahasalamana sy fiarovana dia anisan'ny voalohany nahazo ny faneken'ny World Travel & Tourism Council (WTTC) Safe Travels fanekena izay namela ny toerana hanokafana soa aman-tsara ny volana Jona 2020. Vao haingana koa ny nosy no nanambara fiaramanidina fanampiny avy amin'ny tsena loharano manan-danja sy sivifolo isan-jaton'ny fampiasam-bola ataon'ny mpizahatany efa voavoatra.
Raha mila fanazavana fanampiny momba an'i Jamaika, mankanesa any zahatransia.com.